News Archives - Page5of 91 - Media Nepal
बिश्वकै सबैभन्दा महँगो महलको मालिक साउदीका राजकुमार ! (फोटोसहित)
January 18, 2018	Comments Off on बिश्वकै सबैभन्दा महँगो महलको मालिक साउदीका राजकुमार ! (फोटोसहित)
२ वर्षअघि फ्रान्समा रहेको ‘चतेऔ लुइस एक्सआइभी’ नामक एक आलिशान महल ३०० मिलियन अमेरिकी डलर ( करिव ३१ खर्ब रुपैयाँ) मा बेचिएको थियो । जसलाई संसारकै सबैभन्दा महँगो रकममा बेचिएको महल भनेर ‘फर्चून म्यगजिन’ले उल्लेख गरेको थियो । तर, त्यतिबेला उक्त महल खरिद गर्ने व्यक्तिको नाम भने गोप्य राखिएको थियो ।तर, हालसालै मात्र ‘न्यू योर्क टाइम्स’ले उक्त महल साउदीका राजकुमार …
विपन्न समुदायका विद्यार्थीसँग शुल्क नलिन सर्वोच्चको आदेश
January 18, 2018	Comments Off on विपन्न समुदायका विद्यार्थीसँग शुल्क नलिन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित, जनजाति र महिला लगायत अन्य विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि शुल्क नलिई पठनपाठन गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले गरिब भएकै कारण शिक्षाको हकबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने भन्दै नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्न आदेश जारी गरेको हो। कमैया महिला जागरण समाजका तर्फबाट मानबहादुर डाँगीले हालेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै …
पेट्रोल र डिजेलको भाउ बढ्यो, ग्यासको मूल्य यथावत
January 18, 2018	Comments Off on पेट्रोल र डिजेलको भाउ बढ्यो, ग्यासको मूल्य यथावत
काठमाडौं, ३ माघ- पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ र डिजेलमा २ मूल्य वृद्धि गरेको हो । यससँगै अब पेट्रोल प्रतिलिटर १०३ र डिजेल ७१ रुपैयाँ पुगेको छ । भारतले नयाँ मूल्यसूची पठाएपछि मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ । ग्यसको र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत छ …
January 16, 2018	Comments Off on सन् २०१९मा जनरल मोटर्सले ल्याउदै अहिले सम्मकै नयाँ कार जसमा न ब्रेक हुनेछ न त स्टेयरिङ नै ……यस्ता छन् यसका अरु फिचर्स
अहिलेसम्म तपाईँले कयौँ फिल्ममा कार उड्दै गरेको देख्नु भएको छ । कयौँ बिना गियरवाला गाडीबारे पनि तपाईँले सुन्नु भएको होला । अब चाँडै नै एउटा यस्तो कार आउँदैछ, जसको बारेमा सुनेर तपाईँलाई सुरुमा विश्वास गर्न गाह्रो पर्नेछ । समाचार अनुसार ब्रेक र स्टेरिङ दुवै नभएको कारको निर्माणमा जुटेको छ विश्वचर्चित अमेरिकन गाडी निर्माता कम्पनी जनरल मोटर्स । यस कारमा न …
January 15, 2018	Comments Off on आत्तिएर चिच्याउँदै जिउँदै जले ५ जना, बाहिर बसेर हेरिरह्यो उद्धार टोलीले
घरमा बिजुली सर्ट भएर आगो लाग्दा एकै परिवारका ५ जनाको जिउँदै जलेर ज्यान गएको छ । उनीहरु जल्दै गर्दा घटनास्थलमा उद्धार टोली आइसकेको भए पनि टोलीले बाहिर बसेर हेर्नुबाहेक केही गर्न सकेन । आगोमा जलेर एकै परिवारका हजुरबुवा, नाती दुई नातिनीसहित ५ जनाको ज्यान भएको छ । उद्धार टोली समयमै आएको भए पनि उनीहरुले दमकलमा पाइप फिट गर्न र भर्याङ …
January 14, 2018	Comments Off on पहिलो पटक भारतीय यी अमेरिकी नागरिकलाई मृत्यु दण्डको सजाय दिईदै, तोकियो मिति!
पहिलो भारतीय अमेरिकी कैदीलाई अघिल्लो महिनामा मृत्यु दण्ड सजाय दिईने भएको छ । ३२ वर्षीय रघुनंदन यंदमुरीलाई एक निर्दोष बच्चा र उसको भारतीय हजुरआमाको हत्याको अभियोगमा दोषी पाईएको छ । रघुनंदनलाई २०१४ मा मृत्युको सजाय दिईएको थियो । हत्याराले ६१ वर्षकी भारतीय महिला र उनकी १० महिनाकी नातिनीलाई अपहरण गरेर हत्या गरेका थिए । यस मामलालाई फिरौतीको लागि अपहरणको रुपमा …
January 14, 2018	Comments Off on यी हुन उत्तर कोरियाका सहयोगी देशहरु, हेर्नुहोस कुन-कुन देशको समर्थन छ
सोल , संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद उत्तर कोरियाले आफ्नो परमाणु कार्यक्रममार्फत विश्वलाई हल्लाइरहेको छ। उत्तरले खासगरी अमेरिकाविरुद्ध आफ्ना कार्यक्रम लक्षित गर्दै आइरहेको छ। यस्तो बेला अमेरिकी दबाबमा विश्वका थुप्रै देशले उत्तर कोरियासँग सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेका छन्। अमेरिकासहित दक्षिण कोरिया र जापानले कहिल्यै राजनीतिक सम्बन्ध राखेनन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार पछिल्लो समय उत्तर कोरियासँग टाढिने देशको संख्या बढिरहेको छ। स्पेन, …
पर्स चोरी भएपछि महिलाले गरिन् आत्महत्याको प्रयास, के थियो पर्समा ?
January 14, 2018	Comments Off on पर्स चोरी भएपछि महिलाले गरिन् आत्महत्याको प्रयास, के थियो पर्समा ?
आफ्नो पर्स चोरी भएपछि एक महिलाले गुडिरहेको बसअगाडि हाम्फालेर आत्महत्याको प्रयास गरेकी छिन् । बस चालकको सुझबुझका कारण महिलाको ज्यान बचेको छ । आफ्ना श्रीमानको उपचारको लागि अस्पताल आएकी ती महिलाको पर्समा ५० हजार भारतीय रुपैयाँ रहेको बताइएको छ । पर्स चोरी भएपछि ती महिलासँग एक पैसा पनि बाँकी रहेन । पैसा बाँकी नरहेपछि उपचार गराउन र घर फर्कन समेत …
राष्ट्रपतिले दिइन प्रचण्ड परिवारलाई डिनर, तर बुहारी सिर्जना भने देखिइनन्
January 14, 2018	Comments Off on राष्ट्रपतिले दिइन प्रचण्ड परिवारलाई डिनर, तर बुहारी सिर्जना भने देखिइनन्
राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको परिवारलाई शुक्रवार साँझ शितल निवासमा डिनर दिएकी छिन् ।राष्ट्रपति निवासमा प्रचण्ड परिवारलाई दिइएको डिनरमा पत्नी सीता भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर समेत रहेकी माहिली छोरी रेणु दाहाल र उनका पति अर्जुन पाठक, बुहारी बीना मगर र स्व प्रकाश दाहालका दुबै छोरा प्रसिद्ध र प्रणब सहभागी थिए। डिनरमा जेठा ज्वाइँ सागर केसी र उनका छोरीहरु, …
काठमाडौंको स्वयम्भूनाथमा आगलागी !
January 12, 2018	Comments Off on काठमाडौंको स्वयम्भूनाथमा आगलागी !
काठमाडौंको स्वयम्भूनाथ मन्दिर परिसरमा आगलागी भएको छ । मन्दिर क्षेत्रमा रहेको किर्तन–भजन गर्ने ठाउँमा आगलागी भएको हो । आगलागी के–कति कारणले भयो भन्नेबारे जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । आगलागी नियन्त्रण गर्ने कार्य शुरु भएको जनाइएको छ ।